Qalitaanka Robotic Hysterectomy ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Qalitaanka Robotic Hysterectomy ee Columbus, OH
Waa maxay Robotic Hysterectomy?
Haddii aad wajaheyso qalliinka xubinta taranka dumarka xaalad caafimaad oo aan fiicnayn, iyo VinciHabkani waxa uu noqon karaa dookh adiga. Habkani waa kan ugu yar ee qalliinka ilmo-galeenka ee la heli karo. Inta badan haweenka, iyo VinciQalliinka furan ee caadiga ah, oo ay ku jiraan:
Xanuun aad u yar
Dhiiga ugu yar oo lumiya iyo baahida loo qabo in lagu shubo
Soo kabasho dhakhso leh oo dib ugu noqo waxqabadyadii caadiga ahaa
Meelo yaryar oo la jeexo oo loogu talagalay nabarrada ugu yar
Natiijooyin wanaagsan iyo qanacsanaanta bukaanka, xaalado badan
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, shaqaalaheennu waxay si heer sare ah ugu tababbaran yihiin samaynta qalabka-jiifka ee robotka si ay si badbaado leh uga saaraan ilmo-galeenka koriinka aan fiicnayn. Haddii aad jeclaan lahayd inaad kala hadasho ikhtiyaarkan bixiyahaaga, fadlan ballan la tashi xubin ka mid ah shaqaalahayaga xaruntayada Columbus, OH, maanta.
Ma waxaan ahay musharax u taagan qalliinka isbootiga?
Caadi ahaan, haweenku waxay u baahnaan karaan qalliinka hysterectomy haddii ay qabaan fibroids uterineine, endometriosis, uterine prolapse, dhiig-bax aan caadi ahayn, ama kansar ku jira ilmo-galeenka, ilmo-galeenka, ama ugxan-sidaha. Si kastaba ha ahaatee, bukaannada qaar ayaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn qalliin dhaqameed, taasoo ku xidhan taariikhdooda caafimaad, sida haddii ay leeyihiin nabarro qalliin ama cillado kale oo ka dhex jira xubnahooda miskaha. Xaaladahan, iyo kuwo kale oo badan, waxaan ku talineynaa haweenka inay helaan qalliinka ilmo-galeenka ee robotic.
Sidee buu u shaqeeyaa Qalitaanka Qalitaanka ee Robotic?
Kahor inta aan hawsha bilaabmin, waxaanu waydiin doonaa bukaanka inuu si raaxo leh ugu seexdo dhabarka meel la mid ah marka ay qaataan baaritaanka Pap. Xaaladaha qaarkood, tuubada kaadi mareenka ayaa la isticmaali karaa si loo hubiyo in kaadiheysta ay gebi ahaanba madhan tahay. Halkaa marka ay marayso, xubin ka mid ah kooxdayada ayaa ka nadiifin doona aagga, waxaanan siin doonaa bukaanka qiyaasta suuxinta ee habboon. Marka ay bilaabato inay dhaqan gasho, dhakhtarku wuxuu samayn doonaa shan jeex oo yaryar oo caloosha ah, oo qiyaas ahaan le'eg farta caarada. Waxaan markaa isticmaali doonaa jeexyadan si aan u gelinno qalabkayaga qalliinka.
Dhakhaatiirta qalliinka ayaa fadhiisan doona goobta u dhow ee da Vinci console, halkaas oo ay ku arki karaan gudaha jidhka oo ay ka xakameyn karaan qalabka meel fog. Tani waxay siinaysaa aragtiyo 3D ah oo la weyneeyey 10x ka weyn waxa ay isha bini'aadamku awoodaan inay arkaan, iyagoo hubinaya saxnaanta ugu badan inta ay socoto hawsha. Qalabka laftiisa ayaa u dhaqaaqa sida gacanta bini'aadamka oo kale, inkastoo ay leedahay dhaqdhaqaaq badan oo kala duwan iyo sifaynta gariirka si loo hubiyo in dhammaan dhaqdhaqaaqyadu ay si buuxda u siman yihiin.
Robotic Hysterectomy FAQ
Qalliinka ilmo-galeenka ee robotka miyuu ka fiican yahay kan dhaqameed?
Guud ahaan, robotic hysterectomies ayaa loo arkaa inay ka sarreeyaan farsamooyinka soo jireenka ah. Tan waxaa u sabab ah arrimo badan, oo ay ku jiraan cabbirrada la jeexay oo yar, xanuun yar, joogitaan isbitaal oo gaaban, iyo waqtiyo soo kabasho oo sahlan.
Qalliinka ilmo-galeenka ee loo yaqaan 'robotic hysterectomy' waa xanuun?
Waxaa laga yaabaa in uu jiro xanuun khafiif ah ama dhexdhexaad ah toddobaadyada ka dambeeya habka. Si kastaba ha ahaatee, midkoodna waa inuu ahaado mid daran. Ma aha wax aan caadi ahayn inta lagu jiro wakhtigan in la dareemo xoogaa dhiig-baxa xubinta taranka ah. Bukaanku waxay bilaabi karaan socod lug ah maalinta ka dambeysa qaliinka waxayna awoodi doonaan inay ku soo laabtaan shaqada iyo inta ka hartay hawl maalmeedkooda caadiga ah qiyaastii 3 - 4 toddobaad gudahood.
Intee in le'eg ayay qaadataa in lagu sameeyo qalliinka ilmo-galeenka ee robotka?
Nidaamka laftiisa wuxuu socon karaa meel kasta laga bilaabo 1 - 4 saacadood, taas oo ku xidhan dhowr arrimood. Tani way kala duwanaan kartaa iyadoo ay ugu wacan tahay xawaaraha dhakhtarka qalliinka, kakanaanta xaaladda, iyo arrimo kasta oo soo bixi kara inta lagu jiro qalliinka.
Badbaado, Xulasho Sax ah oo loogu talagalay Hysterectomy
Iyadoo qalliinka hysterectomy-dhaqameedku uu si cadaalad ah waxtar u lahaa taariikhda oo dhan, qalliinka ilmo-galeenka ee robotic-ka ee farsamada da Vinci ayaa si fudud u bixisa heer sax ah iyo xakameyn aan lagu gaari karin hababkan caadiga ah. Haddii aad leedahay xaalado siilka oo aan fiicneyn oo u baahan in laga saaro, kooxda Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa khibrad sare leh si ay uga faa'iideystaan ​​​​farsamooyinkan cusub ee kacaanka si ay uga faa'iideystaan ​​​​bukaankeenna. Nala soo xidhiidh si aad ballan u samaysato Columbus, OH maanta.